दु”ख​द​ ख​ब​र : गायिका काज​ल​ जो”शीको बुवाले सं”सार​ छो”डे, काज​ल कैलाली आ’उदै । - ABNews Nepal
Sep 8, 2021 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, chitwan news, latest news, latest news chitwan, latest news nepal, nepali news, nepali samachar, taja khabar nepal
ई’ण्द्रे’णीको अहिलेको च​र्चित​ गायिका काज​ल​ जोशीलाई पि’त्री शो’क प​रेको छ​ । भार​त​मा काम​ ग’​र्दै आएका उन​का बुवाले भार​त​मै प्रा’ण​ त्यागेको ब​ता’ईएको छ​ । बुवाको नि’ध​न​ भ​एको र​ आफु कैलाली घ​र​ आउन​ लागे’को उन​ले फेस​बुक मार्फ​त​ जान​कारी दिएकी छिन​ ।
अहिले नेपालको एक लोकप्रिय कार्यक्रम ईन्द्रेणी रहेको छ , ईन्द्रेणी न हेर्ने सायद कोइ नै होलान् लामो समयदेखी इन्द्रेणीका दुइ होनहार कलाकार छत्र साही र काजल जोसीको बिहेको चर्चाहरु निकैनै चल्दै आयका थिय। तर बिहे हुन्छनै भनेर नत दुबैले भनेका थिय नत हामि कसैलाई आधिकारीक रुपमा थाहानै थियो। त्यसै टाइटल र केहि व्यक्तिहरुको कुरालाई लियर मात्र अनुमानित आधारमा काजल र छात्रको बिहे भनेर अनेक अनेक कुराहरु आउदै गयको देख्न सकिन्थ्यो। र सबैले रुचायका दोहोरीका जोडी भयरपनि धेरै दर्शक श्रोताहरुले दुबैलाई बिहे गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि दर्शक ले दियको माया भनेर पनि सबैले बुझ्दै आइयो।
आउने दसैं मा बिहेको गर्ने भनेर दुवै जनाले दोहोरीमा समेत बतायपनि बिहे छात्रको घर जुम्लाबाट गर्ने या कसरी गर्ने भन्ने बारे भने बाकी कुरा आउन बाकीनै रहेको छ। तर छत्रले कार्यक्रम बाटै बिहेको कुरा जनायका हुन्। यी दुइ जोडीलाई बिहेको लागि धेरैले अनुरोध समेत गरेको यसभन्दा अगाडि हामि सीताको कुराकानीमा समेत बताउदै आयका थिय। तर अहिले भने कार्यक्रम बाटै सार्बजनिक गरेका हुन्। उक्त कार्यक्रमको तल राखिएको छ हेर्नु होला
OMG ! यस्तो पनि हुन्छ ? काठमाडौंमा भाडामा बस्ने एकल महिलालाई आफ्नै घरबेटिले…बच्चा जन्मिएपछि अलपत्र